सरकारको राजस्व आम्दानी र चालु खर्चबीच साढे १० अर्बको ग्याप, तलब भत्ता खुवाउन ऋणकै भर ? - bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > सरकारको राजस्व आम्दानी र चालु खर्चबीच साढे १० अर्बको ग्याप, तलब भत्ता खुवाउन ऋणकै भर ?
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४ bampijhyala
बाँपीझ्याला, कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि सरकारको राजस्व आम्दानी अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन । तर, अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका खर्च भने बढ्दो अवस्थामै छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारको राजस्व आम्दानी र चालु खर्चबीच साढे १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिएको छ । १ खर्ब ७२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जबकी, यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च नै १ खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारलाई राजस्व आम्दानी कमी हुँदा चालु खर्चमा समेत विदैशिक सहायता वा अन्य आम्दानीतर्फको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपरेको देखिन्छ । विकासका लागि ल्याईने विदेशी ऋण र अनुदान तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आईसकेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
असोजसम्ममा सरकारले कुल २ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, यस अधिसम्ममा सरकारको कुल प्राप्ती भने १ खर्ब ९९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । अर्थात, कुल प्राप्ती र कुल खर्चबीच समेत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको खाडल छ । यद्यपी, कुल प्राप्तीमा वैदेशिक ऋण भने जोड्न बाँकी रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘आजको दिनसम्ममा वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई समेत जोड्दा सरकारको कुल खर्च भन्दा प्राप्ती नै बढी छ’ उनले भने, ‘चालु खर्च भन्दा राजस्व आम्दानी कमी हुनु चाहि राम्रो अवस्था हैन ।’
संजय दत्तले क्यान्सरको लडाई जिते
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४
प्रमोद खरेलको ‘बैगुनी’मा आस्था र दीपक (भिडियोसहित) ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:०४